16 months left to join the AEC for Myanmar - Myanmar News - Mingalapar Forum
16 months left to join the AEC for Myanmar
Started by BurmeseNews , Aug 21 2017 08:57 AM
Posted 21 August 2017 - 08:57 AM
Whatever the case, Myanmar has another 16 months before goods from across ASEAN start flowing into Myanmar under the AEC. “Come December 2018, ASEAN goods will flow in bulk into Myanmar. It is very worrisome. The government should take urgent measures to ensure the survival of our own businesses,” U Tin Cho said.
ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိဆိုတော့ မြန်မာအတွက် အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုင်းအ၀န်း ဆိုသော အာဆီယံနိုင်ငံများကြား ဈေးကွက်တခုတည်းဖြစ်ပြီး ကုန်စည်တွေ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းခွင့်ပေးရမယ့် နေ့ရောက်ဖို့ ၁၆ လသာ လိုပါတော့တယ်။
အစိုးရက အရေးပေါ်သုံးသပ်ချက်တွေလုပ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေ အတွက် စဉ်းစားပေးဖို့လိုပါတယ် လို့ ဦးတင်ချိုကဆိုပါတယ်။
Also tagged with one or more of these keywords: AEC
Myanmar firms jittery over upcoming AEC
Started by BurmeseNews , 24 Sep 2015 Firms, AEC, Upcoming